मानिसको ओठ किन रातो हुन्छ ? - मानिसको ओठ किन रातो हुन्छ ? -
मानिसको ओठ किन रातो हुन्छ ?
उज्यालो प्रतिनिधि २५ जेष्ठ २०७९, बुधबार प्रविधि
काठमाडौँ । तपाईंको ओठ रातो वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो रङको किन हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ रु हामी हरेक दिन ओठको उपयोग गर्छौँ । भिन्न भिन्न कामका लागि । यो यति नाजुक किन हुन्छ रु यो किन सुक्न थाल्छन् रु यो किन फुट्छन् रु मानिसको विकास त्यसरी किन भयो कि उनीहरुको ओठ बने जबकी पंक्षी, कछुवालगायतका जीव–जन्तुको किन बनेनन् रु
बेलायतस्थित लोबोरो युनिभिर्सिटीमा ह्युमन बायोलोजीका प्राध्यापक नोएल क्यामरनले ओठको सबैभन्दा बढी उपयोग खाना खान, सास फेर्न र बोल्न मद्दत गर्नु हो । यो निकै संवेदनशील र नाजुक हुन्छन् । जमाइका अस्पतालका अनुसार ओठभित्र १० लाख सुक्ष्म नलीको अन्त्य जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यो छुँदा सक्रिय हुन्छन् । तापक्रम र ह्युमिडिटी फेरिँदा यो सुक्न थाल्छ ।
नोएल क्यामरनका अनुसार ओठको छालाले अनुहारको बाहिरी छाला र मुखको आन्तरिक म्युकस मेम्ब्रेनको बीच पुलको काम गर्ने गर्छ । म्युकस मेम्ब्रेन दिमागको सेन्सरी करटेक्सको एउटा ठूलो हिस्सा हो । त्यसैले यो निकै संवेदनशील हुन्छ । यसैकारण ओठ आफ्नो र आसपासका मांसपेशीलाई भिन्न–भिन्न तरिकाले हल्लाउन सक्षम हुन्छ ।
क्यामरनका अनुसार ओठलाई माथितिर लैजानका लागि पाँच मांसपेशीले काम गर्छन् जबकी तलतिर लैजानका लागि चार मांसपेशीले काम गर्छन् । यसै चालका कारण मानिस बोल्न सक्छ । यहाँसम्म कि मानिस जब स्वर वर्ण उच्चारण गर्छन् तब उनीहरुको ओठको हलचल यसैगरी हुन्छ । वा केही व्यञ्जन वर्ण उच्चारण गर्दा पनि ।
जस्तै पी अक्षर लाग्ने शब्द उच्चारणका लागि तपाईंले दुईवटै ओठ हल्लाउन आवश्यक छ । जबकी एफ अक्षरबाट सुरु हुने शब्द उच्चारणका लागि ओठ र दाँतको प्रयोग गर्नुपर्छ । नोएल क्यामर भन्छन्, ‘ओठ नहल्लाई कुरा गर्नु तपाईंका लागि असाध्यै मुश्किल हुनेछ । तपाईं केही अक्षर र शब्द त उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्नँ ।’
एम, डब्ल्यू वा बी अक्षरलाई ओठ नहल्लाइकन बोल्ने कोसिस गर्नुहोस् त । यी अक्षरलाई ओठ नहल्लाइकन बोल्न असम्भव छ । धेरै प्रयास गर्दा तपाईंले बोल्न त सक्नुहोला तर उच्चारण गलत हुनेछ । तर अब प्रश्न यो उठ्छ कि ओठ किन यस्तो देखिन्छ रु रातो र त्यसैको परिवारको रङजस्तो किन देखिन्छ रु विशेषगरी जब यसको तुलना अनुहारमा भएका अन्य अंगसँग गरिन्छ ।
ओठको छाला कोसिकाका तीनदेखि पाँच पत्रबाट बनेको हुन्छ । यो शरीरको छालाभन्दा पातलो हुन्छ । अनुहारको छालाभन्दा त धेरै नै पातलो किनभने अनुहारको छालामा कोसिकाका १६ पत्र बनेका हुन्छन् । ओठको छाला हल्का रङको हुन्छ । यसमा मिलेनोसाइट्सको संख्या कम हुन्छ । मिलेनोसाइट्समा मिलेनिन पिगमेन्ट्स हुन्छन्, जसले छालालाई रङ प्रदान गर्छन् । यसकौ कारण छालाले रातो वा गुलाबी रङ पाउँछ ।
नोएल क्यामरनका अनुसार अलि कालो वर्ण भएका व्यक्तिहरुको ओठ त्यति धेरै रातो देखिँदैन किनभने छालाको ओठमा धेरै मेलानिन हुन्छ, त्यसैले पनि उनीहरुका ओठ कालो देखिन्छ ।
ओठको छाला हल्का हुन्छ त्यसैले त्यसको पिगमेन्टेशन बढी देखिन्छ । त्यो रातो रङको देखिन्छ । यसको एउटा ठूलो कारण के पनि हो भने हल्का छालाको पछाडि लाखौँ रगतका नली हुन्छन् जुन रातो रङको हुन्छ । त्यसले पनि ओठलाई रातो देखाउँछ ।
ओठ र अनुहारका अन्य अंगबीच केही भिन्नता भएको क्यामरन औँल्याउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ओठको छाला निकै हल्का, रौँ बिनाका र पसिना ननिस्कने ग्रन्थीको हुन्छ । त्यसैले यो बढी नाजुक, छिट्टै सुक्ने र फुट्ने खालका हुन्छन् । यसको माथि शरीरका अन्य छालामा झैँ पसिना र तेलको ग्रन्थी हुँदैनन् । जसले छालालाई चिल्लो बनाउन सहयोग गर्छ, प्याथोजेन्सलाई टाढा राखोस्, तापक्रमलाई सन्तुलित बनाओस् । त्यसैले ओठ छिट्टै सुक्छ र छिटो सुक्छ ।’
ओठबाहेक हत्केला र पैतालामा पनि रौँ उम्रिदैनन् किनभने यसले यी बिना नै बढी सक्षम तरिकाले काम गर्छन् । ओठ बोल्न, खान र सास लिनका लागि प्रयोग त हुन्छ, यो सबैभन्दा बढी चुम्बन गर्नमा प्रयोग गरिन्छ । ओठ शरीरको उत्तेजक अंगमध्ये एक हो । यसका लागि मानिस एक–अर्काप्रति आकर्षित हुनुपर्छ ।
अनरका तीन नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा आउँदै
‘नमस्ते पे’बाट नेपाल टेलिकमको डाटा र भोइस प्याक
नेपालको टेलिकम ‘एनटीटीभी’ एपको परीक्षण शुरु